Kedu ka esi amata isiokwu kachasị mma maka ndepụta Amazon?
Ọ bụ ihe na-enweghị atụ na maka ngwaahịa ịmepụta ihe ọ bụla na-ere ahịa kwesịrị ị nweta ndepụta ziri ezi nke ire mkpụrụokwu maka Amazon ama ederede njikarịcha. Mgbe a tụlere ụzọ ziri ezi, ihe ndị a na-eme na ọchụchọ na nkwakọ okwu ọnụ nwere ike inyere gị aka ịchọta n'ihu ndị ịzụrụ ihe nwere ike ịchọta ihe dị ha mkpa. Nke a bụ eleghị anya ọ bụ naanị ụzọ ị ga - esi nweta ego ị na-azụ ahịa na-enweta ngwaahịa gị na ire ere ya na ọtụtụ ndị dị elu rịọrọ na ya mere ajụjụ bara uru dị ka o kwere mee. Mana enwere uzo obula nke ichotara isi okwu nke Amazon dika akwukwo pro? Ọfọn, ka anyị hụ.
Mpempe ahia kachasị mma maka Ndepụta Amazon
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị chee ya ihu - isi engines (dika Google n'onwe ya) na-achọkarị oge ọ bụla onye ọ bụla na-eleta, nakwa dịka ọnụọgụ abụọ ọnụego iji mee mkpebi dị mma maka ịnye ọkwa ogo onwe maka ibe weebụ ọ bụla dị na Intanet n'ime ndekpọ ya. Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, Amazon 'A9 search algorithm na-agbagharị nanị otu nnukwu ire-centric mmesho - ọnụego nke ntọghata na-egosi na ọma (ma ọ bụ) ndị ọbịa na-converted site na gị nwere ike ahịa n'ime ezigbo buyers. Ọ pụtara na ọganihu ahịa gị na nso nso a na ọnụọgụ ndị na-emepụta ihe dị mma site na A9 algorithm dị ka ihe ndị dị ike dị oke mkpa.
Malite nyocha ọchụchọ gị na otu Mind
Ya mere, otu esi enwe ihe ịga nke ọma n'inweta ọkwa dị mma nke ọma na ụdị ọrụ SERPs Amazon si na mmalite? Ekwenyere m na onye ọ bụla na-ere ihe n'ebe ahụ (na ndị na-ere ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị, karịsịa) kwesịrị ịmalite site na ịmepụta ngwaahịa ha ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị ka ndị A9 ghọtara dị ka ndị dị mma, dị oke mkpa igosi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ahịa nwere ike ịme ihe n'ịntanetị na Amazon. Ma ebe a bụ ihe nwere ike inyere gị aka. Tụlee ndepụta dị mkpirikpi a na ndepụta nke aro dị mfe na ihe atụ maka gị ịtụgharị na nyochaa isiokwu ziri ezi maka ndepụta aha Amazon gị - n'ime mgbalị dị nro na nke zuru ezu.
Eke Ndepụta Ndepụta Gị nke Ihe Edebere Nchịkọta Maka Ndepụta Amazon
Gbalịa iche n'echeghị igbe. Cheta, n'ụzọ ọ bụla ndị lekwasịrị anya na-ege ntị nwere ike ịchọ ihe gị na ire ere - nwere ike ịbụ gị kacha emeri isiokwu ma ọ bụ ogologo-ọdụ search Nchikota.
Alala azụ ịlele thesaurus ugboro abụọ ịchọta ụfọdụ nkwupụta nzuzo ndị ọzọ n'ebe ahụ, yana ederede LSI ndị dị mkpa maka ngwaahịa gị ma ọ bụ ihe dị na ngwaahịa.
Jide n'aka na ị ga-atụle nyocha ọchụchọ a ga-eme maka isiokwu nke ọ bụla tupu tinye ya na ndepụta gị nke ndị nwere ike ịme mmeri. Enwere m ike iji ihe eji ederede dị ka Okwu Ndị Ahịa ma ọ bụ Onye Nlekọta Akwukwoo iji nyere gị aka inweta ọnụ ọgụgụ nke usoro ahụ.
Buru n'obi na mgbe ụfọdụ ị na-eme nchọpụta ọchụchọ nwere ike ịchọta ọbụna okwu ndị a na-edeghị ede, nsụgharị nhọrọ nke ụdị iche / iche iche, yana ịmepụta mgbanwe dị iche iche na akụkụ dị mkpa na otu isiokwu ahụ Source .